सुन्दै होस उड्ने छ, राती १२ बजे किचकन्नी सङ बसेर बियर खाएका युवाको पर्दाफास, सत्य कुरा यस्तो रहेछ (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
Sisir Budhathoki June 21, 2021
झापा । झापाको दुधेमा रहेको जङलमा मोरङ मिक्लाजुङका १८ बर्षका युवालाइ आत्माले राती चिहान घारीमा लगेको भन्दै मिडियामा आएका छ्न । मोबाइलमा रिचार्ज किन्न जादा राती ९:३० बजे एक युवतीले बियर खाम भन्दै २/३ ओटा बियर खुवाएको र चिहान घारीमा लगेको भन्दै आफ्ना कुरा राखेका छ्न । चिहान घारीमा लगेर यतै बसुम भन्दै उनले अनुरोध गरेको र आफू बस्दिन भनेर कोठा फर्किन्दा पछि पछि ती युवती पनि आएको बताएका छन ।
उनले बताए अनुसार यो घटना सत्य हो या हैन ? उनले आफ्ना धेरै साथि संग राति झगडा भएछ तर मलाई केहि थाहा भएन भन्दै कुरा राखेका हुन् । धामी,झाक्री , भुत ,प्रेतलाई अन्धबिस्वासको रुपमा लिने गरिन्छ तर कहिले काहीँ नेपालमा यस्ता घटना घटेका समाचार आइरहन्छ्न । यो घटनाको सत्य तथ्य कुरा के हो ? के के भएको थियो त ? जस्ताको त्यस्तै तल भिडियोमा हेर्नुहोला ।